Na-achọ oge kacha mma n’oge niile? Ndepụta a bụ nke gị - Ndị Ọzọ
67 N'ime oge ihe nkiri kacha mma na oge niile (enweghị ọkwa ọkwa)
Kedu ihe na - akọwa “anime kacha mma” oge niile?
Azịza ezi uche dị na ya dabeere na Fim na nyocha site na saịtị dika MAL (MyAnimeList).
Nsogbu dị na nke ahụ bụ: ọ bụ naanị ndị na-ege ntị MAL. Na ụfọdụ nyocha abụghị ihe m ga-atụle nyocha 'ezigbo'. Ọ bụ naanị mkpesa ụmụaka site na ndị anime fans.
Mgbe ahụ ị nwere anime ntuli aka na Japan na-agba ọsọ , na-achịkọta ihe karịrị 10,000-100,000 + na ngụkọta. A obere ọnụ ọgụgụ mgbe ị na-atụle 50-100 nde Fans gburugburu ụwa.
N'ihi nke a, enweghị ụzọ zuru oke iji dozie arụmụka nke onwe a.
Ya mere na nke ahụ kwuru… Nke a bụ ndepụta m nke nnukwu ihe nkiri oge niile!
Anime nke m na-eche kacha mma, ma kwesịkwa otuto ma ọ bụ karịa karịa ka ha na-enweta.
67 Kachasị Oge Anime Oge Niile (Na Ọ nweghị Iwu):
1. Nnukwu anụ
Monster mere otu ihe nke ọma: kwupụta 'anụ ọjọọ dị n'ime' anyị niile.
All ọ na-ewe bụ ezighi ezi ọnọdụ nke ọnọdụ iji kpalie mmadụ n'ụzọ ọjọọ. Na-eteta ihe ọjọọ anyị na-echeghị na anyị nwere ike.
Anime ole na ole bụ ndị a nwere ezi uche.
Violet Evergarden na-enwu n'ihi obi ya, akụkọ akụkọ mmetụta uche.
Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe mmetụta ọmịiko n’ebe onye bụ isi nọ, ị na-echekwa ya maka ndị na-akwado nkwado na-egosi n’ụzọ.
Violet Evergarden na-agwakọta ihe ngosi mara mma, ihe nkiri dị ịtụnanya, na akụkọ dị ike niile n'otu bọọlụ nke ịdị ukwuu.
3. Clannad: Mgbe Akụkọ gasịrị
Oge nke Clannad dị mma, mana ọ naghịdị atụnyere ịdị ukwuu nke oge 2.
Dị ka Violet Evergarden, Clannad After Story jupụtara na mgbu na mwute. Abụọ nke ole na ole Anime enwewo ike igosipụta n'ụzọ zuru oke.
Jormungand bụ naanị ụdị anime nke ụdị ya iji gosipụta ndụ ndị na-ere ngwa agha. Eziokwu nke ịkọ akụkọ, ahụmịhe, na ụdị ndụ ndị ahịa na-ere ahịa na-eduga.
Anime a bụ ihe magburu onwe ya maka ihe ọ na-eme ma zubere ime.
Madoka Magica batara na foto a wee sị: 'f * ck all this cliché magical girl bullsh * t, oge eruola ịma jijiji'.
Nke ahụ bụ ihe na-eme Madoka Magica dị mma nke ukwuu. Kama ịgbaso ụzọ a na-ahụkarị, ọ mebiri mgbakọ ma gbanwee ụdị a ka ọ bụrụ ihe gbara ọchịchịrị ma na-enye nsogbu.
6. Nwa Lagoon
Dị ka Jormungand, Black Lagoon bụ otu n'ime ihe nkiri kachasị egwu na mbara ala.
Ọ bụla agwa nwere a n'oge gara aga nsogbu metụtara n'ike n'ike, n'ụzọ mmekọahụ, ọgwụ ọjọọ, mpụ, na ihe ọ bụla ifo na-anọchi anya.
Black Lagoon na-eme ya nke ọma na ngalaba a. Na ihe na-ekwu maka onwe ya.
7. Ọrịa Psycho
Psycho Pass na-enyocha echiche sayensị site n'echiche nke ndị uwe ojii na iwu. Ka anyị ghara ichefu banyere teknụzụ nke ahụ ya mere tupu oge ya na usoro anime a.
E nwere usoro uwe ojii ole na ole dịka ọ dị n'ime ụwa anime, na Psycho Pass na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ile anya na-enweghị cliches.
Kpọ Psycho Pass “mbụ” bụ okwu ekwesighi. Enweghị ntụnyere maka ihe ọ na-eme.
8. Mma agha Art Online
Mma agha Art Online na-agbanye n'elu isi ya nke ukwuu. N'ezie nke ahụ bụ otu m si chọpụta ya. Na ndị kpọrọ asị mere ka m juo anya.
Ihe SAO kacha eme kacha mma bụ ịgwakọta egwuregwu ịgba egwu na eziokwu mebere, na ịme ya ntakịrị ọchịchịrị oseose ihe.
N'ihe banyere egwuregwu na VR, Onweghi oge na-abịaru nso maka ihe SAO na-anọchi anya ya. Ihe ịga nke ọma ya karịrị ihe o kwesiri.
Ọ bụ ihe anime dị n'ihu nke oge ya.
Na Mma agha Art Online: Mgbaghara bụ ihe kachasị mma anyị hụworo site na usoro SAO ruo ugbu a.
9. Akame Ga Igbu
Akame Ga Kill bụ ihe na-eme mgbe ụmụ amaala nọ n’otu obodo nupụrụ isi n’ọchịchị na aghụghọ, nke na-ekwekọghị n’ọrụ na ọha mmadụ.
Nke a bụ ihe Akame Ga Kill banyere, ọ na-emekwa ka isi ya doo anya site na obi ọjọọ, omume siri ike, na ụfọdụ n'ime kacha mma agha Mpaghara anime nwere na-enye.
Ọ bụkwa ntakịrị ihe a na-adịghị ahụkebe n'ụzọ ọ na-esi ejide ndị isi edemede (na ọnwụ ha).
Shiki na-amalite ngwa ngwa, ma mechaa ghọọ ihe gbara ọchịchịrị, nke na-akpaghasị na omume siri ike, na ị gaghị ama ihe ị ga-eche.
Ọ bụ otu ihe a ka m kacha hụ n'anya Shiki. Otu n'ime egwu kachasị mma n'oge niile.
N'otu aka, Hinamatsuri ga - eme ka ị na - achị ọchị maka ọchị ọchị ya.
N'akụkụ aka nke ọzọ, anime ga ewetara gi nso ibe akwa na ịkwa ákwá.
N'ime anime niile m lere anya, mmadụ ole na ole nwere ike ijikwa igosipụta ihe ọchị na 'mwute' nke ọma na-enweghị kpochapu nke ozo.
Nke ahụ bụ ihe na-eme Hinamatsuri pụrụ iche nye m.
12. Miss Kobayashi’s Nwa agbogho
Dragọn bi na ụmụ mmadụ abụghị ihe okike n'onwe ya. Mana ụzọ anime na-eme echiche a ma tụgharịa ya ka ọ bụrụ ihe ọchị ọchị, yana 'iberibe ndụ' ihe na-atọ ụtọ.
Ma ọ dị ezi na-eme ya.
Otu n'ime obere anime iji mee echiche siri ike dị ka ịda mba na igbu onwe.
N'ihi nke a naanị, na maka Kedu a na-egosipụta ya site na mmalite ruo na njedebe bụ oke mmetụta uche na-eleghara anya.
Enwere m ekele maka mmemme ahụ pụrụ iche.
14. Dragọn Naa Z
DBZ bụ kpochapụwo. Ọ bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ anime ji adị na ọkwa zuru ụwa ọnụ.
Onweghị ihe ọzọ ị ga-ekwu.
15. lecha ọcha
Cha ọcha bụ ihu ọma DBZ na-enweghị OP odide.
Kwuo ihe ịchọrọ banyere lecha ọcha, mana enweghị anime nwere ike dochie ya maka ihe ọ na-eme.
Njikọ: Kachasị Anime na-ehota Site Bcha ọcha na-eguzo Ule Oge
16. Onye ojoo ojoo
Flying Witch bụ ihe kachasị mfe, ọtụtụ izu ike usoro m na-ele anya.
Onweghị clichés, ọrụ ofufe ma ọ bụ ụdị nzuzu a na-ahụkarị na anime gị kwa ụbọchị. Ma nke ahụ bụ ihe na-eme ka Flying Witch pụta ìhè.
Ọ bụ ihe kacha nso na “ezigbo” telivishọn, belụsọ ọ na-aga aga.
17. Nwanyi Na Nwa Nwunye
N’okpuru usoro anime nke n’enwetaghi nnukwu ihunanya ma obu mmata.
Maka oge ya bụ ihe ọchị (na parody) bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị m mechara mee nke ọma.
Ọ bụ ihe egwuregwu mbụ na nke ya.
Fairy Tail nwere ihe omimi kachasị mma nke anime nwere ike inye. Tụnyere ihe ngosi dịka DBZ.
Ahụtụbeghị m ọtụtụ ihe odide na-echefu echefu ma baa uru n'otu oge ahụ.
Ọ bụ ihu ọma usoro Shounen kachasị amasị m nke 21st narị afọ.
19. Ndụ ọdachi dakwasịrị Saiki K
Otu n'ime ihe ọchị, nke kachasị nwee ọchị na afọ ndị na-adịbeghị anya. M hụrụ ya n'anya na-akparị ụdị tropes, na-enweghị n'ezie ịbanye n'ókèala ahụ.
20. Re Zero: Ibido Ndụ Na Anotherwa Ọzọ
Anime ọzọ nke na-akparị tropes ndị a na-ahụkarị, ma ghara iji onwe ya kpọrọ ihe.
Akụkụ miri emi, nke gbara ọchịchịrị, nke uche nke Re Zero na-eme ka ọ bụrụ ihe egwuregwu nke ga-eme ka ị chee.
Njikọ: Ebumnuche 5 Dị Mkpa Mere Emilia Ji Dị Mma Karịa Rem Site Re Zero
21. Higurashi: Mgbe Ha na-ebe akwa
Higurashi dị ka otu nnukwu nnwale sayensị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịmara ihe ga-eme ọzọ, yana otu ihe ga-esi mee.
Maka usoro egwu, ọ bụ ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa, amamihe, na otu n'ime echiche kachasị eche echiche.
22. Tanaka Kun Na-adighi Aha mgbe niile
Anime dị mfe na ihe ọchị dị mfe. Ọ dị nnọọ mfe na ọ na-atọ ọchị, Tanaka Kun dịkwa izuike zuru ike ihi ụra.
Na ụzọ dị mma.
Mpekere nke ndụ na-elekwasị anya n'echiche dịka imeziwanye onwe onye, ​​uto, uche na mmekọrịta
Nweghị ike iji Barakamon tụnyere. Na usoro dị mkpirikpi, ọ nwere ọtụtụ mma jupụtara n'ime ya.
My Hero Academia bụ otu n'ime ihe kachasị egwu nke 21st narị afọ. Shodị Shounen chọrọ ihe ọhụrụ, na MHA bụ azịza maka mkpa ahụ.
Shakugan No Shana nnukwu mbara igwe jupụtara na Denizens, Flame Haze na ụmụ mmadụ ndị ejidere n'etiti.
Ọ nwere ezigbo ngwakọta nke ihe ejiri Ananayas (na-enweghị gafere n'elu), ezigbo ihe nkiri na ihe odide na-atọ ụtọ nwere ikike na-atọ ụtọ.
Oge ọ bụla dị iche, ọ bụkwa kpochapụwo n’anya m.
nchịkọta iri kacha elu nke oge niile
26. Eureka Asaa
A mecha usoro na-enweghị mba tụnyere.
Eureka Asaa (nke Studio Bones mere) na-eji ihe omimi, amaokwu Akwụkwọ Nsọ, ihe odide dịgasị iche iche na ịhụnanya iji kọọ akụkọ ya.
Onweghikwa Mecha n’elu ụwa nke na - eme ya nke ọma karịa n’ógbè a (ọbụnadị Darling In The Franxx).
27. Mgba Egwuregwu zuru ezu!
Egwuregwu zuru ezu na-ewe romance ụlọ akwụkwọ sekọndrị, na-agbakwụnye iyi ọha egwu, emereme, na realism na mix.
Nke a bụ otu n'ime obere anime na-enweta ọbụna ka mma ya na oge obula emeputara.
28. Ebili Ota Okpu
Mbili dike bu ọta bụ na-adịbeghị anya usoro anime site na 2019. Mana ọ bụ otu n’ime Isekai ole na ole m na-atụle oke.
Naofumi na-alụ ọgụ ziri ezi megide okpukpu abụọ nke mmegide mmekọahụ, na otu esi kwenye okwu nwanyị ahụ na-enweghị ihe akaebe.
Nkwulu na-adịgide adịgide nke agwa ya, na ọtụtụ ndị na-ajụ 'iche' ma ọ bụ jụọ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị… Ghara ikwu banyere mmekọrịta Naofumi na Raphtalia (na ihe ndị ọzọ).
Ọta dike bụ usoro bara uru dị ka mba ndị ọzọ, na ya kpere mma karịa ọtụtụ Anime nwere ike ikwu.
29. Ọkaraedo Zero
Mgbe ọ na-abịa anime na akụkọ ihe mere eme, Akara Zero na-achịkwa. Karịsịa maka ogo ya nke ime ihe, izi ezi na ntụrụndụ.
Agaghị m etinye usoro Fate ọzọ gbasara Fate Zero, mana ọ karịrị akarị nke usoro mma mara AMA otu esi enwu na ụdị ọrụ.
30. Schoollọ akwụkwọ Ndụ
School Live dị mma, mana n'eziokwu ọ bụ otu n'ime nke kacha mie emi na-egosi na ndepụta a. Ikwu isiokwu dị ka ọrịa ọgụgụ isi, psychosis, ịmụ anya arọ nrọ na isiokwu ndị yiri ya.
Dị ka Madoka Magica, anime ahụ na-aghọgbu gị iche na ọ bụ usoro ihe egwuregwu ruo mgbe oge gachara ịlaghachi.
Gụọ: 20 N'ime usoro Anime kachasị dị egwu nke ga-eju gị anya
Gurren Lagann bụ naanị a mama usoro. Na mgbe m kwuru oke - m na-ekwu na ọ dị ike, na-atọ ọchị, na-akpali akpali ma na-eme ka ị gbasaa.
Enwere m ike ịhụ ebe ngosi dịka Kill La Kill were si n'ike mmụọ nsọ ha. Gurren Lagann ga-abụ kpochapụwo n'anya m.
32. Ekwensu Buru Oge Oge
Dị ka ọdachi nke ndụ nke saiki k, anime a bụ okike na etu esi ejikwa onwe ya. Ole na ole ntochi Anime nwere ike ikwu na ha bụ ihe okike dị ka A B THIS ebe ha ka na-atụrụ ndụ.
Akụkọ a na-atọ oke ọchị ka ọ ghara ịbụ ihe ọchị. Anyị chọrọ oge 2 maka Ekwensu Bụ Nkebi Oge!
Echiche na-akpali usoro anime, elekwasị anya na ihe ọ bụla karịa:
Workingrụkọ ọrụ ọnụ iji dozie esemokwu.
Na 'onye na-egwu egwu egwu'.
N'elu ọ naghị ada ụda ụwa, mana otu esi etinye ya bụ akụkọ ọzọ.
34. O buru na O bu Nwa M nwanyi
Ọ bụrụ na ọ bụ maka Nwa m nwanyị ewepụtara na 2019. M wee banye ya na enweghị atụmanya.
Ihe omume nke mbụ malitere na Dale onye hụrụ nwa mmụọ ọjọọ n'oké ọhịa, bụ onye e gburu ezinụlọ ya.
Ọ nakweere nwa agbọghọ a ma kpọọ ya 'Latina', ọ bụkwa ebe ahụ ka aha anime si malite.
Ọ bụ ezumike nke ndụ ya na otutu ihe eji ekpo oku nke ndi isi jikoro, na mmekorita ha na-eto.
Nkata ahụ abụghị ihe pụrụ iche, ọ bụghịkwa anime na-enwu ọkụ karịa ka ọ ghara ịmasị onye ọ bụla nọ na Shounen. Ma maka ihe ọ na - anapụta - Ọ bụrụ na ọ bụ maka nwa m nwanyị nke ọma dịka ọ na - enye obi ụtọ.
Ọ nwere akụkụ mmetụta uche dị ka Violet Evergarden.
35. Njem Kino: Thewa Mara Mma
Njem Kino: Thewa Mara Mma bu usoro anime nke n’eme otu ihe nke oma: kọọ akụkọ.
Kino na-agba ọgba tum tum ya na ụwa, ọ nọghị ihe karịrị ụbọchị 3 na mba ọ bụla.
N'okpuru elu anime a na-ekpughe nghọta miri emi banyere ụmụ mmadụ na otu anyị si ebi ndụ, n'elu uche na akparamaagwa nke na-aga n'azụ ọdịbendị dịgasị iche iche anyị bi na ya.
Mfe otu n'ime ihe kachasị mma n'oge niile.
36. Kokoro Jikọọ
Ejikọtaghị Kokoro Connect dị ka usoro 'akparamaagwa', mana maka etu esi egosi ya? Ọ maa bu.
Mpekere nke ndụ na mmekọrịta ịhụnanya n'akụkụ, anime a ga - eme ka ị chee echiche na - enweghị ụdị ngosi ọ bụla ọzọ. Ihe dị ka ihe ndị ị kpọrọ “ezigbo” ndị enyi gị na-eche gbasara gị mgbe ị na-agwa gị okwu. Ma ọ bụ ihe ha 'na-eche' banyere gị n'ozuzu.
Njikọ: Ndepụta nke Anime Ahụhụ 30 I Kwesịrị Considertụle
37. Ihe onwu mara
Mgbe m lechara Ọnwụ Ọnwụ nke afọ a (2019) Enwere m ike ịhụ ihe kpatara anime a ji dị kwadoro nke otutu mmadu.
Achọrọ m izere ihe ngosi elu, mana nchapụta nke nkata ahụ, edemede na akparamaagwa enweghị ntụpọ.
Ana m enye Nkọwa Ọnwụ 10/10. Ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma anime niile.
Shirobako na-bụ ihe nkiri Niile Fans kwesịrị ịhụ.
Ọ bụ banyere ụlọ ọrụ anime na-eji ezi uche na-eme ihe na-eme n'azụ Mpaghara.
Ọrụ nrụgide, ndị na-eme ihe nkiri, ụlọ ọrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ karịrị akarị. Usoro oge, otu esi eme anime, duzie ya ma kee ya…
Gaghị ahụ otu nkọwa na-efu na usoro nke ihe na-abanye na anime na Japan.
Ọ bụghị naanị na ezi uche ezie, ọ bụ ezigbo ya rue na mma na ntụrụndụ ị ga-esi Shirobako pụọ.
Maa otu n'ime kacha mma oge nke 2010 si.
Sakura Quest na-bụ okpuru iberi nke usoro ndụ. Emeghachiri na 2017 Ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ.
Ọ bụ ezigbo ngwakọta nke njem, azụmahịa, ihe ọchị dị nro na akụkọ bara uru nke sitere na mmalite ruo na njedebe.
Ndepụta a agaghị adị mma ma enweghị ya!
40. Kenichi: Onye Kachasị Mụọ Ugwu
Kenichi na-eweghara onwe ya ịzụ ọzụzụ na ịlụ ọgụ, na-enye ya ike ịgbachitere onwe ya ma nwetaghachi obi ike ya.
N’ụwa ebe mmegbu na-eme kwa ụbọchị, anime a bụ ihe na - akpali akpali. Karịsịa maka ndị nọ n'afọ iri na ụma.
41. Onye nlekọta nke Mmụọ Nsọ
Enwere m mmasị anime na mmetụta nke 'akụkọ ihe mere eme' ejiri ya.
Onye nche nke Mmụọ Nsọ bụ maka onye isi a gbahapụrụ agbahapụ na onye na-eche ya nche.
Production I.G weputara onwe ha ozo (ha mere Psycho Pass).
42. Agha Nri
Kedu ihe ị maara nke na-eri nri, ma gbakwunye ecchi n’emebighi onwe ya?
Agha nri na-achịkwa n'ụdị 'nri', ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ọbụna ihe.
Won’t gaghị ahụ ihe okike karịa, Shounen pụrụ iche nke na-ewe ụzọ na-enweghị atụ dịka nri nri.
Okwesiri inwe ihe ịga nke ọma ọ bụla ọ ga - enweta.
43. Cerfọdụ Railgun Sayensị
Isi Iyi: Mikoto Misaka
Railgun, nke yiri Hinamatsuri, na-elekwasị anya na ihe abụọ n'otu oge.
Iberi nke ndụ ngosipụta.
Omume ahụ na-arịa ọrịa, a na-ajụkwa ọhụụ nke akụkụ ndụ a.
Ma mgbe anyị nọ n’isiokwu a: Railgun bụ ezigbo anime karịa Magical Index.
44. D. Nwoke awọ
D. Grey Man enwewo mgbe obula iche iche m. Ọtụtụ Shounen bụ naanị… Shounen.
Enwere n'ụzọ nkịtị 1000 nke Shounen n'ihi na ụdị ahụ jupụtara na BS.
D. Nwoke Grey bu otu njuaka nke putara ihe n’enweghi ike ileputa ihe omuma ndi ozo di nma.
45. Koodu Geass
Code Geass bụ usoro # 1 Mecha / action anime m, mgbe ọ bụla.
Atụmatụ aghụghọ, ihe odide dị iche iche, obi ịta mmiri nke Lelouch… E nwere ọtụtụ ihe ịkpọ aha ebe a na ihe kpatara Code Geass ji dị mma.
Mana otu ihe pụtara ìhè bụ atụmatụ atụmatụ 'chess-like'.
Lelouch na-eche 5 isi isi ma na-eme ihe ọ bụla iji belata nsogbu ọ bụla na-apụta na agha.
Enwekwara uzo di n'etiti Lelouch Lamperouge na Light Yagami site na onwu onwu !.
46. ​​Ogbugbu mmadu
Usoro ohuru ohuru na 'ulo akwukwo' nke anime.
Iji nke a tụnyere anime ụlọ akwụkwọ oge a bụ mkparị. N'ihi na ọ bụ ihe pụrụ iche na ụzọ ya na onye bụ isi: E dere Koro Sensei karịa ọtụtụ ndị na-ahụkarị gị n'oge a.
Nkata ahụ n'onwe ya bụ nke mbụ, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla dị ka ihe ọ bụla i nwere ike ịnwale iji ya tụnyere.
Otu ihe m na-asọpụrụ banyere Samurai Champloo bụ otu o si agwakọta ọdịnala Samurai na vibes nke Hip Hop.
Enweghị m ike iche anime ọ bụla na-eme nke a. Na ihe odide 3 dị iche iche dị iche iche na ibe ha, na ọ na-eme ka onye ọ bụla n'ime ha dị mfe icheta.
Samurai Champloo bụ kpochapụwo.
Kaizaki Arata, a na-enye NEET dị afọ iri abụọ na asaa ohere ọzọ 'ịmeghachi' ndụ ya. Inye ya ohere idozi mmejọ ya, ma mee onwe ya ihe.
ReLife bụ usoro ihe ijuanya ọzọ na - eju anya nke dị n’okpuru.
49. Ikwu Tie!
Ikwu Beat bụ diamond zoro ezo ọtụtụ ndị anaghị ahụ nwuo nke. E kwuwerị - ọ nwere fanbase, mana ọ bụ ọ bụghị isi.
Ọ bụ banyere nwa agbọghọ na-abọ ọbọ na enyi ya nwoke mbụ bụ onye jiri ịrụsi ọrụ ike ya, ego, na enweghị uche mee ihe ịga nke ọma na ọrụ ya. Naanị ka okporo mmiri ya dị ka ọ na-adịghị sh * t.
M na-emetụta mkpali nke ịbọ ọbọ. Mana ogo anime a na-eweta n'ihi na nke ebumnobi a gbapụrụ m.
Ha anaghị eme mmekọrịta ịhụnanya dika nke A ọzọ.
Njikọ: The Ultimate List Of Skip Beat Quotes Can Pụrụ Icheta Na
Charlotte bụ naanị a pụrụ iche usoro. Ọ na-ewere echiche a na-ahụkarị nke ndị ike, wee tụgharịa ya n'isi ya.
Kama nke ọ bụla nwere ikike na-enweghị njedebe, enwere oke na ihe ha nwere ike ime. Ọbụna ihe dị njọ na iji ikike ha eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya ma dị mfe karịa ihe ngosi yiri.
Njikọ: Ihe mere Charlotte ji bụrụ usoro Anime pụrụ iche
51. Onye Okpomoku ojoo ojoo
Ọ bụrụ na m nwere ohere ịghọ 'nwa ewu' ọzọ, nke a bụ anime m ga-ekiri.
Enweghị ọrụ ofufe.
Ọ dịghị “nwara” ofufe ọrụ.
Enweghị agbagọ BS.
Ihu ọma: clichés niile ị nwere ike ịchọta n'usoro yiri nke a adịghị adị na LWA.
Studio Trigger gosipụtara onwe ha, na anime ahụ kwesịrị ka a mata ya karịa ka enwetara.
52. Ogbu mmadu
Onweghi ihe dika ulo akwukwo ochie 90’s anime. Ndị na-agba Slayers jere ije n'okporo ụzọ nke aka ya, ma kpalie ụdị agwa nwanyị 'ike nwanyị' ị hụrụ na ngosi nke oge a.
M na-akpọ ya akwụkwọ ochie nke Fairy Tail (na-enweghị ọrụ ofufe). Ọ bụ ezigbo ihe ọzọ maka FB Fans.
n'elu iri animes oge niile
Olddị ụlọ akwụkwọ ochie ọzọ m enweghị ike inye aka tinye na ndepụta a. Fọdụ n'ime eserese ụlọ akwụkwọ ochie na aghụghọ bụ ọkacha mmasị m taa.
Anaghị m ekwu okwu banyere Inuyasha ọtụtụ, mana ọ ka bụ ọkacha mmasị n'agbanyeghị.
Ọ bụ ihe mbụ maka oge ya, Isekai agaghị adị otu ma ọ bụrụ na enweghị ya Inuyasha .
K-On bụ eze na eze nwanyị nke 'Moe' dị ka anyị si mara ya. Mana nke ahụ abụghị ihe na-eme ka anime ahụ kwesịrị.
K-on bụ usoro ama ama nke na-enweghị ezigbo nkata, mana o nwere ihe odide ntụrụndụ na ngosipụta zuru oke iji mee ka ọ baa uru.
Ihe ọchị ahụ bụ ụfọdụ n'ime kacha mma Ahụla m na usoro anime, na agaghị m ewerekwa K-On dị egwu 'siri ike'.
55. Mkpụrụ obi na-eri nri
Mkpụrụ obi na-eri nri dị n'okpuru ụdị Shounen. Oge ole ihe ngosi a na-apụtaghị na mkparịta ụka bụ ihe ịtụnanya. N'ihi na anime n'onwe ya bụ ihe m ga - akpọ 'isi' maka ọganiihu ya.
Ọ bụ ihe atụ kachasị mma nke ihe 'nnukwu' usoro Shounen dị ka nwanyị (na nwoke) protagonist. Ma kwado ihe odide ndị nwoke na ndị nwanyị.
56. Ọlaedo Kamuy
Golden Kamuy bụ usoro na - adịghị ahụkebe maka ọdịdị ọdịdị ya. Ole na ole na-aga miri emi n’akụkọ ihe mere eme ha dịka Golden Kamuy, nke gosipụtara agbụrụ ochie ndị Japan akpọrọ: Ainu.
Na Golden Kamuy na-ekpori ndụ na-enweghị agụmakwụkwọ ọ bụla na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ikiri.
Gụọ: 12 Anime Kachasị Anime Banyere Omenala Ndị Japan
57. Ebe Dịkarịrị Eluigwe na Ala
Ọ bụrụ na ịmara m nke ọma - ị ga-amara na m enweghị ike iguzo ikiri anime na subbed version. Ọ ga-akara m mma ilele egwu ma zere ịgụ ndepụta okwu n'otu oge.
Ma Ebe Dị Karịa Eluigwe na Ala emeela m ka m nwee mmasị ịmata ya, m lere ya anya na nsụgharị mbụ. Anọ m na-agbapụ site na mma.
Ọ bụ otu n'ime usoro ihe egwu na - enye ume ọhụrụ ka ewepụtara na 2018.
Kpọ ya 'ike mmụọ nsọ' bụ okwu ekwesighi.
Yona Of Dawn bụ anime m na-achọkarị ile. Obi dị m ụtọ na m mere.
N'ụzọ ụfọdụ Yona Of The Dawn bụ njem, ejiri Ananayas usoro na ntochi ya mere ọhụrụ (na nzuzu) na ọ bụ ihe ijuanya. Karịsịa n'elu omume niile, oge ụfọdụ mmekọrịta ịhụnanya na ebe a na-alụ agha site n'oge ruo n'oge.
Ugbu a ọ chọrọ oge 2!
59. Gbuo La Gbuo
Ọ bụ agaghị ekwe omume otu usoro Ecchi nwere ike ịbụ ihe omume juputara na akụkọ edere nke ọma.
Ọ bụ ya mere Kill La Kill ji kpochapụ ihe m na-atụghị anya ya ma jide mmasị m.
Studio Trigger si na nke a mee onwe ha. Ọ ga-abụ otu n'ime oge kachasị mma nke oge m.
Njikọ: The Ultimate List Of igbu La igbu Quotes
Echeghị m na 'Shoujo' anime nwere ike ịtọ ụtọ. Ma nke ahụ bụ ebe m hiere ụzọ.
Mgbe m gbasịrị n'ime ihe nkiri dị ka Nana, nke Madhouse mepụtara, enweghị m ike ikwenye na etu usoro ịhụnanya a dịruru n'anya ma dịkwa ike.
Ihe eji eme ihe bu 'eziokwu na ndu', ihe odide a bu ihe omuma na otutu uzo.
Ọ bụ mmadụ ole na ole na-abịaru nso maka nke a.
Njikọ: Ndepụta kachasị nke ndụ Anime
61. Aria Ndị Animation
Zọ kachasị mma iji kọwaa anime a bụ: dị nwayọ, na-adị mfe ma na izu ike ọ dị ka ịkọ oyi n'ụsọ osimiri.
Ọ bụ fechaa na-atọ ọchị, ma aghụghọ ndụ ihe na-ekpo ọkụ-hearted isi agwa na-eme ka a iberi nke ndụ usoro dịghị onye ofufe kwesịrị mgbe uche.
Nke a bụ Ecchi ọzọ usoro nke mebiri olile anya m. Ma jiri afọ ojuju dochie ya.
Shimoneta bụ ọgwụ siri ike ilo maka ọtụtụ ndị Fans, n'ihi oke oke ọ bụ maka nkwenkwe ya, atụmatụ, asụsụ na ebumnuche ya. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime afọ ya, ọ ga-eju gị anya na omimi na ọbụlagodi ọchị anime a ga-enye.
Minami-Ke bụ onye akwụ ụgwọ , echefuru iberi nke ndụ na ntochi usoro. Ọ bụ ihe dị ka ụmụnne nwanyị 3 bi n'otu ụlọ, yana shenanigans niile ha na-ebili.
Na oge 3 na mkpokọta na cliches ndị ahụ n'ezie na-akpa ọchị, Ọ dịghị mgbe m nwetara ihe omume na-enweghị ọchị.
Aga m ewere ya 10/10 n’egbughị oge.
64. Ala Ofesi Ogu
Ala nke ndị na-egbu egbu bụ ihe anime na-eme ka CGI dị mma karịa mgbe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị lere anya ọtụtụ anime, ị ga-ama oke egwu CGI n'ozuzu ya.
Ala nke ndị na-egbu egbu na-ewere ya na ọkwa ọzọ maka ogo mmegharị ya. Aga m ekwu na ọ ka mma karịa Violet Evergarden n'ụzọ nke ya.
Akụkọ ahụ n’onwe ya bụ ihe omimi mana ọ na-atọ ụtọ iji buru gị gafee rue ngwụcha n’enweghị mmetụta dịka ị tufuru oge gị.
Ọ bụ ukwu usoro na ihe odide a na-echefu echefu.
65. Monogatari usoro
Monogatari bụ ụdị anime pụrụ iche na ejiri Ananayas / demon genre. Ọ bụ ụdị anime nke jupụtara na mkparịta ụka na ngosipụta 'nkata', yabụ ọ nwere ike ime ka ụfọdụ ndị pụọ.
Ma ọ bụrụ na ịrapara na ya wee banye n'akụkụ dị mma, ị ga-achọpụta otú echiche na-akpali akpali ma na-akpali akpali anime a ga-abụ.
Na site na ya site na Studio Shaft, ihe nkiri na ntụgharị n'etiti ọnọdụ dị mma.
Ọ bụ abu.
Nisekoi emeputara site na Studio Shaft, dika Madoka Magica na Monogatari.
Nke a adịghị amasị gị ụdị harem anime ebe ya juputara na cliches na nzuzu tropes na ọ bụ siri ike iji ya kpọrọ ihe.
Nisekoi bu usoro di nma na ihe odide kwesiri ekwesi nke na eme ka anime dum di ka osisi ekeresimesi na Disemba.
'Nka' bụ legit.
Ọ bụrụ n 'ịchọrọ ilele otu usoro ndụ na ọtụtụ ihe omimi nye ndị odide ahụ, yana ozi na-akpali iche echiche - Oregairu bụ onye a ga-ahụ.
Fọrọ nke nta ọ dịghị nke ederede n’usoro a edeghi nke oma. Ndị isi akụkọ ji ọtụtụ uru na akụkọ zuru ezu, yana ozi oge ụfọdụ 'zoro ezo' n'okpuru elu.
Ọ dị m ka Oregairu enweghị nsogbu ma ndị mmadụ ezughị oke iti mkpu banyere ya. Ọ bụ ezie na e gosiri ya nke ukwuu.
Ebube Kwuru Okwu:
Ogige Ndị Mmehie.
Olu Na-agbachi nkịtị.
Obughi Non Biyori.
23 nke Kasị Ukwuu Anime Okwu nke Oge niile
Kedu otu Anime siworo mepụta na afọ 57 gara aga
22+ Vegeta Quotes Dragon Ball Z Fans Ga-ekele
6 N'ime Ndụ Nwere Nzube Kachasị Mkpa You Pụrụ Frommụta Site Na Gbuo La Kill
Ihe mere Kyoto Animation ji bụrụ otu n’ime ihe nkiri Anime Studio kachasị dị egwu
Anụmanụ Kyoto anatala ihe karịrị nde $ 30 n'onyinye!
26 + nke Anime Kachasị Mma Anime Ndị Dị Mma Ileghara Anya
Nchịkọta Nke Kachasị Egwu sitere na Tamako Market Maka Fim Anime
15 + Girlsmụ agbọghọ Anime Na-atọ Whotọ
15 + zuru oke Asuna Yuuki T uwe elu maka SAO Fans
17 Ọchịchịrị Elfen edgha ụgha Quotes Anime Fans agaghị echezọ
6 Of Akame Akwukwo Nso Nke Akame Ga Gbu
egwuregwu igwu egwu mgbe ị na-ekiri anime
ezi iberi nke ndụ romance anime
Anime kacha elu 20 oge niile
Anime kacha njọ gosiri oge niile